Brussels dia mamoaka hetsika tsy azo lavina LGBTI + amin'ity fararano ity
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Brussels dia mamoaka hetsika tsy azo lavina LGBTI + amin'ity fararano ity
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Oktobra 3, 2019
Isan-taona, Brussels'fomba fiainana amin'ny alina amin'ny volana septambra. Ireo mpikarakara hetsika sy alim-pandihizana dia manolotra filaharana manintona hahaliana ny mpihinana. The LGBTI + tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fiaraha-monina. Amin'ity taona ity, mankalaza ny tsingerintaona nahaterahana toerana sy marika 3 ny renivohitra: La Démence, Soirée Bénédiction ary ny cabaret ao Chez Maman.
Tsy matory velively i Bruxelles, indrindra ny distrikan'i Saint-Jacques, foiben'ny sehatry ny pelaka any Bruxelles. Ity faritany velona ity dia taratry ny toetran'ilay renivohitra velona sy mafana. Ny zava-drehetra dia fialan-tsiny amin'ny fankalazana.
Miaraka amin'ny zom-pirenena 183, Bruxelles no fahasamihafana renivohitra. Ny fanahy malalaka dia tohanan'ny lalàna tsy manavakavaka. Tena manana ny zava-drehetra i Bruxelles.
Ny renivohitra eropeana koa dia mirehareha isan'alina sy toerana maro. Mpifamaly maro no mankany an-drenivohitra hankafy ny alin'ny hadalana amin'ny iray amin'ireo hetsika tsy tambo isaina izay manome aina izany.
Amin'ity fararano ity, eo anelanelan'ny fahatongavan'i The Black Madonna at Bénédiction, ny Pink Night na ny fankalazana ny faha-30 taonan'ny La Démence, dia hararaotina ny mpikaroka. Ny lisitry ny hetsika sy alina LGBTI + dia lava amin'ity vanim-potoana ity. Ity misy topimaso:
Fifidianana Mister Bear Belzika
Ny andiany faha-9 an'ny Belza Bear Pride dia hatao hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 6 Oktobra amin'ny toerana maro any Bruxelles. Ny fifidianana an'i Andriamatoa Bear Belzika no zava-dehibe amin'ity festival ity. Mpitsara matihanina sy ny besinimaro no hantsoina hifidy ny mpandresy amin'ity taona ity amin'ny hariva feno fahagagana ao amin'ny Bodega.
Daty: 5 Oktobra
Toerana: La Bodega
C12 x Benediction XIV • Ny Black Madonna
Benediction manimba ny fivorian'ny cabaret mahazatra. Toerana misokatra ho an'ny famoronana ka andraisan'ny rehetra ny fandraisana azy. Ny hetahetany: ny mandrava ny sisintany eo anelanelan'ny sehatra sy ny mpihaino mba hamoronana fombafomba miavaka eo amin'izy ireo. Natombok'i Juriji Der Klee tamin'ny taona 2017 ary miorina, nanomboka ny volana oktobra 2018, tao amin'ny C12 - izay namokatra ny hetsika rehetra nanomboka tamin'izay - Hankalaza ny tsingerintaona faharoany i Benediction amin'ny zoma 11 oktobra. Ho fanamarihana ity tsingerintaona ity, Benediction sy C12 dia manana voninahitra lehibe amin'ny fandraisana an'i The Black Madonna sy Mike Servito, sary 2 an'ny sehatry ny pelaka amerikana.
Filaharana: The Black Madonna, Mike Servito
Daty: 11 Oktobra
La Démence - Faran'ny herinandro fankalazana ny faha-30 taonan'ny fety
La Démence dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo antoko pelaka tsara indrindra any Eropa. Mitranga in-12 isan-taona izy io, mazàna isaky ny zoma hariva na alohan'ny fialantsasatra ary manintona ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ + avy amin'ny lafivalon'i Eropa sy ny sisa. Eto isika dia miteny amin'ny fiteny rehetra, ary tsy misy kaody fiakanjo: bera, mpanjakavavy hozatra, fetisy, hoditra latina, lasibatry ny lamaody, tanora ary tsy dia tanora loatra, dia arahabaina daholo. Ny hariva dia karakarain'i Fuse, izay iray amin'ireo klioba tsara indrindra any Belzika. Alao antoka fa vonona mandritra ny alina lava ianao, satria manomboka amin'ny 22:00 ny fety ary mifarana amin'ny mitataovovonana ny ampitso!
Filaharana: Pagano (UK), Steven Redant (ES), Chris Bekker (DE), Sebastien Triumph (FR), Paul Heron (UK), John Dixon (FR), Ben Manson (FR), Jon Doe (DE) , Mister Mola (BE), Dikky Vendetta (NL), Elias (ES), Andrei Stan (RO), Kenne Perry (BE), Bernard Gavilan (BE), Jo (BE), Breizbear (BE)
Daty: 31 Oktobra - 3 Novambra 2019
Toerana: Fuse, Palais 12
Alina mavokely faha-18
Saro-piaro mahery setra sy mahery setra, Pink Screens no hany fetiben'ny sarimihetsika any Belzika niresaka ny olana momba ny lahy sy ny vavy amin'ny fomba maro samihafa miaraka amin'ny fisokafana, ny hatsikana ary ny te hahafanta-javatra. Ity dia hetsika famaranana tsy maintsy anatrehana ny festival ary mampiseho ny sehatry ny mozika hafahafa ankafizin'ny biby fety nanatrika.
Daty: 16 Novambra
Chez Maman mankalaza ny faha-25 taonany
Misokatra hatramin'ny 3 Desambra 1994, Chez Maman no lasa mari-pahaizana cafe cabaret any Bruxelles. Isaky ny faran'ny herinandro i Maman sy ny zanany vavy dia manao fampisehoana amin'ity sehatra angano ankehitriny ity. Rehefa miteny sehatra isika dia ny mifanohitra no tena tiana holazaina. Satria ao Chez Maman, ny lampihazo dia ny kaonteran'ny efitrano lehibe. Fa efa fantatra fa tsy maninona ny habe! Ity vato marbra ity dia manana majika izay olona zato no miaina isan-kerinandro.
Ho fanamarihana ny tsingerintaona faha-25 taonany, nanangana fivarotana tao amin'ny trano fandihizana Bloody Louis i Neny ho an'ny takarivan'ny fankalazana ary seho izay hitohy hatramin'ny maraina.
Daty: 7 Desambra 2019
Toerana: Louis mihosin-dra